Natsiridza Yako Google SERP Kuvapo Neaya Akapfuma Snippets | Martech Zone
Natsiridza Yako Google SERP Kuvapo Neaya Akapfuma Snippets
Makambani anoshandisa tani yenguva vachiona kana ivo vari pachinzvimbo pakutsvaga uye nekuvandudza zvinoshamisa zvemukati nemasaiti anotyaira shanduko. Asi zano rakakosha rinowanzoshayikwa nderekuti vangasimudzire sei kupinda kwavo pa yekutsvaga injini mhinduro peji. Kunyangwe iwe uri pachinzvimbo kana kwete chete zvine basa kana wekutsvaga mushandisi akamanikidzwa kunyatso kudzvanya kuburikidza.
Nepo zita rakakura, meta tsananguro, uye permalink inogona kugadzirisa mikana iyoyo… kuwedzera zvakapfuma zvinyoro kune yako saiti kunogona kwazvo kutyaira-kuburikidza nemitengo. Fungidzira, semuenzaniso, iwe uchitsvaga chakasarudzika chigadzirwa pamhepo uye runyorwa rwezvinyorwa zviripo. Kana mucherechedzo hafu-yekudzika pazasi peji unosanganisira mufananidzo, mitengo, kuwanikwa, kana ongororo… unogona kunge uchimanikidzwa kudzvanya iyo yekupinda kwete pane iri pamusoro.
SERP peji rekumhara nechinangwa chekutsvaga kana kutenga. Chikamu chakakosha cheyako organic yekutsvaga nzira inofanirwa kuve yekushandisa uye nekukudziridza kuoneka kwako pamapeji ekutsvaga emapeji ... uye ruzha rwemashoko ndidzo nzira dzenyu dzekuita saizvozvo.
Google Yakapfuma Snippet Zviwanikwa
Unogona kureva Schema.org maitiro ekushandisa zvizere matavi akapfuma - ndiwo mwero unoshandiswa neGoogle. Pane nzira nhatu dzekuisa iyi data mukati mewebsite yako, maererano neGoogle:
Microdata - Yakavhurika-nharaunda HTML kududzirwa kunoshandiswa kune dendere rakarongedzwa dhata mukati meHTML zvemukati. Kunge RDFa, inoshandisa HTML tag hunhu kutumidza zvivakwa zvaunoda kuburitsa sedata rakarongeka. Iyo inowanzo shandiswa mune iro peji muviri, asi inogona kushandiswa mumusoro.
RDFa - Kuwedzeredzwa kweHTML5 inotsigira data rakabatanidzwa nekuunza HTML tag hunhu zvinoenderana neyemukati-inoonekwa yezvinhu iwe yaunoda kutsanangura yeinjini dzekutsvaga. RDFa inowanzo shandiswa mune ese ari maviri musoro nemuviri zvikamu zveiyo HTML peji.
Edza Yako Yakapfuma Snippets
Google Yakapfuma Snippets
Kushambadzira Mojo yakapa iyi runyorwa rweGoogle Rich Snippets mune yavo infographic, 11 Nzira dzeKushandisa Google Yakapfuma Snippets yeKusimudzira Yako Kutsvaga Mhedzisiro. Heino runyorwa rweakapfuma snippets:
Reviews - inogona kushandiswa kuratidza wongororo uye ratings yezvigadzirwa kana mabhizinesi mune yekutsvaga mhinduro.
Recipes - inogona kushandiswa kuratidza zvimwe zvakawanda nezve recipe, senge zvigadzirwa, nguva yekubika, kana macalorie.
vanhu - ruzivo rwakadai senzvimbo, zita rebasa, uye kambani inogona kuratidzwa mune yekutsvaga mhedzisiro yemunhu mumwe - kusanganisira yavo remadunhurirwa, pikicha, uye hukama hwehukama.
Business - ruzivo nezve bhizinesi kana sangano senge nzvimbo, nhamba yefoni, kana kunyange logo yavo.
Products - mapeji echigadzirwa anogona kutengeswa kumusoro kuti aratidze ruzivo senge mutengo, zvinopihwa, zviyero zvechigadzirwa, uye kuwanikwa.
Events - zviitiko zvepamhepo, makonati, mitambo, misangano zvinogona kupa rumwe ruzivo kusanganisira mazuva, nzvimbo, mifananidzo, uye mitengo yetikiti.
mumhanzi - ruzivo rwemhizha kusanganisira yavo mifananidzo, maalbham, uye kunyangwe yakadzamidzirwa odhiyo faira yekuteerera.
Video - thumbnail uye bhatani rekutamba rinogona kuratidzwa, kuwedzera kukanda-kuburikidza nemitengo ne41%.
Apps - kurodha pasi uye neruzivo rwekuwedzera pane software mapuratifomu uye nharembozha.
Breadcrumbs - ipa hutongi hwewebsite yako kuitira kuti mushandisi weinjini yekutsvaga akwanise kuyanana kumusoro kwenyaya yechimwe chikamu kuchikamu kana muchikamu.
Kana iwe uchinyatsoda kuona yakadzama tarisa kune akapfuma snippets - verenga 28 Google yakapfuma snippets iwe yaunofanirwa kuziva [gwara + infographic]. Frantisek Vrab akanyora gwara risinganzwisisike rine kodhi yakatarwa, kuongororwa, uye rumwe ruzivo runobatsira.
28 Google Rich Snippets Iwe Unofanira Kuziva
Imwe snippet yakadzikiswa ndiyo iyo munyori tag. Zvinosuruvarisa (mumaonero angu) kuti Google yakabvisa izvi sezvo ndichifunga kuti yakapa vanhu kutaridzika kuri nani pazvinyorwa zvavakanyora pawebhu.
Tags: infographicjson-ldmicrodatavanhurdfaReviewsmupfumi snippet infographicruzha rwemashokoschemaschema markupnyokaVideo
Hashtag Tsvagiridzo, Kuongorora, Kuongorora, uye Maturu Ekushandisa